आफ्नो हात जगन्नाथ : विधि छल्न उपभोक्ता समिति प्रयोग ! « Lokpath
२०७७, १४ पुष मंगलवार १३:२६
आफ्नो हात जगन्नाथ : विधि छल्न उपभोक्ता समिति प्रयोग !
प्रकाशित मिति : २०७७, १४ पुष मंगलवार १३:२६
काठमाडौं । काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ स्थित वीरभद्र मार्गको करीब छ सय मिटर सडकको निर्माण शुरु भएको पाँच वर्षसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन ।
नगरपालिकाको योजनामा उपभोक्ता समितिले निर्माण शुरु गरेको सडक नबन्दा वर्षामा यो सडकमा सवारी त परै जाओस् मानिससमेत हिँड्न सक्दैनन् । सवारी परै राखेर स्थानीयवासी जुत्ता खोलेर खहरे तर्न बाध्य छन् । पछिल्लो समय वीरभद्र टोल सुधार समितिमार्फत निर्माण भइरहेको सडक अलपत्र छ । समितिमा रहेकाहरु त्यो सडकबाट हिँड्न नपर्ने भएपछि पनि लामो समयसम्म काम हुन नसकेको हो । सडक उपयोग नै नगर्नेहरु उपभोक्ता समितिमा बसेपछि सडकको अवस्था यस्तो भएको हो ।
सडक अलपत्र भएपछि निर्माणकै लागि टोलवासी सङ्गठित भएर नवतनधाम टोल सुधार समिति गठन गरे । नवगठित समितिले ३० हजार जुटाएर रोलर लगाएपछि मात्र हिँड्न सकिने भएको सचिव हिमाल ओझाले जानकारी दिए । रोलर लगाएको खर्च वीरभद्र टोल सुधार समितिले तिरिदिने प्रतिबद्धता भने जनाएको छ । बजेट पाउने समितिले काम नगरी सडक अलपत्र भएर काम गर्न अर्को समिति बनाएको यो प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । उपत्यकामै यस्ता अनेकौँ उदाहरण भेटिन्छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिका–१९ मा हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमले उपभोक्ता समितिमार्फत् शुरु गरेका तीन योजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । पेश्की लिइएको त्यो योजना पूरा गराउन महानगरपालिकाले चासो नदेखाएको वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्ष सुमन खड्गी बताछन् । सांस्कृतिक शहरको पर्यटक आउने भित्री सडकको काम वर्षौंदेखि अलपत्र हुँदा देशको छविसमेत बिग्रिएको उनको गुनासो छ । राजधानीको मध्य शहरमा त उपभोक्ता समितिका कामको यस्तो अवस्था छ भने ग्रामीण भेगमा के भइरहेको होला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को अन्तिम महिना अर्थात् असारमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–३ भद्रवासमा अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर भई वाग्मती नदीबाट शहीद आदर्श क्याम्पससम्मको सडक निर्माण गर्न डेढ करोड बजेट विनियोजन भयो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत दिइएको सो बजेट त्यहाँ लैजान मन्त्रालयको उच्च पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको हात थियो ।
एक करोडभन्दा धेरैको बजेटबाट काम गराउँदा ठेक्का लगाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि तीनवटा उपभोक्ता समितिमा योजना बाँडेर असारे काम गरियो । ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै अर्थ मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीले कानून मिचेर काम गर्न प्रोत्साहित गरेका यस्ता उदाहरण अरू पनि धेरै छन् । तीनवटा उपभोक्ता समितिमा बाँडिएको एक किमीभन्दा छोटो यो सडक निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी नै लगाइयो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक रामप्रसाद डोटेल योजना टुक्रा पारेर उपभोक्ता समितिलाई दिन नपाइने बताउछन् । सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्दै सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले ल्याउन लागेको कार्यविधिमा उपभोक्ता समितिलाई व्यवस्थित गर्ने प्रावधान राखिएकामा कार्यालयका तर्फबाट पनि गत वर्ष फागुनमा सुझाव पठाइएको उनले जानकारी दिए ।
कार्यालयले योजना टुक्र्याउन नपाइने, उपभोक्ता समितिले काम गर्दा यन्त्र लगाउन नपाइने, समिति गठनलगायत विषयमा लिखित सुझाव पठाएको ११ महिना बितिसकेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा जनप्रतिनिधि नैतिकताका आधारमा बस्न मिल्दैन । निजामती एवं विभिन्न संस्थानलगायत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी भने कर्मचारी सेवा सर्त नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै उपभोक्ता समितिमा बस्न नहुने उपमहालेखापरीक्षक डोटेल बताउछन् ।
उपभोक्ता समितिका विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकाले वार्षिक देशभर हजारौँ साना योजनामा अर्बौं रुपैयाँ सिध्याउने गरिएको छ । समितिमार्फत् काम गर्नैपर्ने भएपछि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरी पारदर्र्शी रुपमा काम गर्नुपर्ने बताछन् नागरिक संस्थाबाट यससम्बन्धी कामको अध्ययन गरिरहेका फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल ।
प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता समितिमा बस्नेहरु एकै किसिमका मानिस हुन्छन् । पेसा, व्यवसाय केही नभएकाहरुले उपभोक्ता समिति नामको कम्पनी चलाएर मालामाल हुने गरेका छन् । देखिने आय केही नभए पनि समितिमा बस्ने सबैजसोले मोटरसाइकल चढ्छन् । प्रत्येक वर्ष ठूला उपभोक्ता समितिमा बस्नेले त कार नै चढेर हिँड्छन् । थोरै आयआर्जन गर्नेले पनि स्थायी लेखा नं ९प्यान नं० लिएर वार्षिकरुपमा आयकर तिर्नुपर्छ । तर उपभोक्ता समितिमा बसेर वैधअवैध तरिकाबाट जति कमाए पनि आयकर तिर्नु पर्दैन ।
कार्यविधि मस्यौदाको नेतृत्व गर्नुभएका कार्यालयका पूर्व सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा सरोकार भएका मन्त्रालयलगायत निकायबाट राय नआएकाले काममा ढिलाइ भएको बताउछन् । कार्यविधि नहुँदा कम्प्युटरलगायत सामग्री खरीद गर्दासमेत उपभोक्ता समिति गठन हुने गरेको छ ।
कार्यालयले कार्यविधि निर्माण शुरु गरेपनि नेतृत्व परिवर्तन हुने बित्तिकै त्यस विषयमा जानकारी नहुने गरेको छ । कार्यालयका प्रवक्ता सुशील ढकाल सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीमै उपभोक्ता समितिसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भएकाले कार्यालयले कार्यविधिको मस्यौदा नगरेको दाबी गर्छन् ।
यसैगरी ३८ स्थानीय तहले लागत अनुमानमा उल्लेखित रकममध्ये जनसहभागिताको अंश नखुलाई २३ करोड ६० लाख ५१ हजार खर्च लेखेका छन् । करिब २०२ स्थानीय तहले १४ करोड उपभोक्ता अंश कट्टी नगरी समितिलाई भुक्तानी दिएकाले असुल गर्न कार्यालयले सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा अनेक समस्या आएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि दुई वर्षअघि नै ६१ बुँदे निर्देशन दिँदै कानूनअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव एवं सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डे समितिका काम अपारदर्शी हुने गरेको बताउछन् ।
उपभोक्ता समितिले गर्ने कामका विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा महालेखालेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ । लेखा समितिमा उपभोक्ताकै विषयमा छुट्टै छलफल गराउन सकिने भए पनि नभ्याएकाले कानून निर्माणमा निर्देशन दिन सकेको छैन । स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकै कारण सांसद पूर्वाधार कोषको बजेटसमेत विवादमा आउने गरेको छ । सांसद पूर्वाधार कोषका अधिकांश बजेट पनि उपभोक्ता समितिमार्फत नै खर्च हुने गरेको छ ।
कास्की । गण्डकी कोरोनाले थलिएको पर्यटनलाई चलायमान बनाउन संस्थागत रुपमा समेत विभिन्न प्रयास
जुम्ला । जुम्लाका स्याउ किसानलाई यो याममा स्याउका बगैँचा व्यवस्थापन तथा काँटछाँट गर्न
छोराको चाहनाले कैलालीमा गर्भपतन गर्नेको संख्या बढ्दै
दुर्गा देवकोटा/कैलाली । कैलालीकी एक महिलाका दुई छोरी र एक छोरामध्ये छोरा फरक
सोमनाथ लामिछाने /काठमाडौं । समकालीन विश्वमा आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिबाट शक्तिशाली मुलुक संयुक्तराज्य